Toni Kroos oo ka hadlay eedeymaha Sergio Ramos kaga imaanaya dhaawacii uu u geestay Mohamed Salah – Gool FM
(Real Madrid) 06 Juunyo 2018. Khadka dhexe kooxda xulka qaranka Germany iyo kooxda Real Madrid Toni Kroos ayaa wuxuu ka hadlay dhaleeceenta uu helayo kabtanka Los Blancos Sergio Ramos sababa la xiriira Mohamed Salah.
Sergio Ramos ayaa lagu eedeenayaa dhaawacii uu u geestay Mohamed Salah kulankii finalka Champions League ay ku wada ciyaareen kooxaha Real Madrid iyo Liverpool bishii hore.
Toni Kroos ayaa wareysi uu la yeeshay wargeyska ‘Marca” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay: “Waan hubaa in Ramos uusan si ula kac ah u dhaawicin Salah, garsoorahana wax qalad ah ma uusan ka dhigin Ramos, runtii ma arko wax ka baxsan anshaxa kubada cagta uu sameeyay Sergio”.
“Ramos ma ahan ciyaaryahan rabsho badan, waxaana ku faanayaa kabtanka kooxda Real Madrid”.
Kroos ayaa dhinaca kale ka hadlay diyaar garowga uu xulkiis Germany ugu jiro koobka aduunka ee 2018
“Ku guuleysiga koobka aduunka waa wax I dhiiri galinaya, waxaan wajihi doonaa tartan aan ku dooneyno inaan ku difaacano koobka”.